Oromoo Hidhadhu Qawwee:OPDO’n wayyaa uffattu ofirraa baaste ODP taate malee qalbii salphinaa ofirraa hin baasne! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoo Hidhadhu Qawwee:OPDO’n wayyaa uffattu ofirraa baaste ODP taate malee qalbii salphinaa ofirraa hin baasne!
Oromoo Hidhadhu Qawwee:OPDO’n wayyaa uffattu ofirraa baaste ODP taate malee qalbii salphinaa ofirraa hin baasne!
Oromoo Hidhadhu Qawwee : OPDO’n wayyaa uffattu ofirraa baaste ODP taate malee qalbii salphinaa ofirraa hin baasne!
Akka dhaabaattis tahe akka dhuunfaatti ‘Oromoon walirratti hin duullu…’ jenneet callisaa turre malee, yeroo yaa’ii dhaabbattummaa #9ffaa #opdoJimmatti godhamerratti,
guyyaa tokko guutuu bilbilaa fi miidiyaan akka hin seenne dhorkanii
waan hoggantootumti gurguddoon #opdo dabballootaa fi kaadiroota ishee mariisisaa oolte hunda of harkaa qabna.
#ABO irratti maal akka isaan mari’atan hunda.
#ABIYYI fi #Lammaanis waan isaan ABO irratti odeessan nutuu of dhoksaa turre.
Erga isaanumarraa dhufteemmoo maal godhu !!!
Mariin icciitii guyyaa sanaa #soba akka hin jenne ammoo raawwiin isaa argamaa jira.
Kunneenis har’a Askoo #Saansutti ummata Irreecha Malkaa Ateeteetti deemurraa guurame.
“Labsii akkasiitu nu gahe” jedhu poolisoonni fi waraanni.
Addisuu Arega kun diiga Oromoomummaa qaba jechuun namaa rakkisa.
Benshanguul hidhaate jira,Amarii hidhaate jira,Ogaadeen Hidhaate jira, Gambeellii hidhaate jira. Oromoo hiikkaachiisuun malif barbaachiise ?
Addisuun ergamma fudhaate waan maxxansaa jiru kan ilaaluun barbaachisaa dha. OPDO maqaa jijjiraate malee of hin jijjirre
“#Addunyaa_Daagim_Tolasaa Qeerroo magaalaa Gimbiiti, torban darbe yeroo Gumuz lola uummata keenya irratti bante, aanaa #Gimbii karaa ganda #Diddissaa_Biqilaal jedhamuun roorroo lammii irra ga’aa jiru argee, qeerroo magaalaa Gimbii waliin dirmannaa taasise. Namooti isa waliin bobba’an kaan lubbuu hafanii, kaan immoo du’anii reeffi isaanii yeroo galu; Adduunyaan garuu achi buuteen isaa dhabamee guyyoota hedduuf barbaadamaa ture.
Gochaa sukanneessaa Gumuz gochaa turteen namni hedduun qaamni cicciramanii bineensaan nyaatamanii kaan immoo reeffi isaanii bishaanitti darbamaa akka ture odeeffannoo achirraa argame ni ibsa ture, obboleessi keenya kun hireen sun quunnamuu hin oolle kan nu jechisiise uffati isaa fi suuraan borsaa kiisii (waaleetii) isaa keessa ture argamee qaamni isaa garuu dhabamee hafe.
Haala kanaan haadhoo ofii of biraa dhabanii garaan yoomiyyuu nama hin fayyu, mucaan qaxalee akkas lammii isaatiif quuqamu hirbaata bineensaa ta’ee, reeffa isaa illee arganii awwaallachuun hin danda’amne.
Ta’us garuu duutni #Addunyaa du’a gootaati, lammii isaaf gaachana ta’ee lubbuu isaa tokkittii dabarsee laate, barabaraan seenaan isa yaadata, maatii fi firoottan isaa hundaaf jajjabina hawwaa, lubbuun isaa boqonnaa haa argatu, ekeraa isaa jala booki haa yaa’uun jedha.
Rakkoo sabakee ilaaltee
Taa’uu hin dandeenye garaankee
Quuqamaakoo yaa leencakoo
Goota si dhalche abbaan kee
Roorroo lammii jibbitee
Diina wallaansoo qabdee
Dirmannaa gootaa gootee
lubbuukee tokko dhabde
Anaa nyaatu yaa Adduu
Anaa nyaatu haadhooko
Sabakee bira dhaabbattee
Lubbuukee aarsaa gootee
Hirbaata bineensaa taatee
Hin fayyu garaan namuu
Sin dagatu seenaan yoomuu.”
Via: Muzaya Wallaggaa
OPDO’n wayyaa uffattu ofirraa baaste ODP taate malee qalbii salphinaa ofirraa hin baasne!
Waa’ee hidhannoo/qawwee yoo dubbannu biyyi/ummanni hanga ummata Amerikaa hidhate addunyaarra hin jiru. Amerikaa keessaa qawwee miliyoona 357 akka jiru tilmaamama. Lakkoofsi namaa garuu miliyoona 326. Kana jechuun qawween (shugguxiiniis qawwee jedhama asitti) miliyoona 31on lakkofsa namaa caala jechuu dha.
Amweikaa keessatti hidhachuun mirga. Miega kana swerri mirkanesseef Second Amendment (geeddarama 2ffaa) kan bara 1791 keessa godhame ture. Geeddarama 2ffaa jechuun fooyya’insa yeroo lammataatif heera ittiinbulmaata biyyattii irratti godhame jechuu dha.
Mirgi kun mirga qawwee qabaachuu fii deemmachuunii (The right to keep and bear firearms) jedhamuu beekkama. Mirgi kun sababii sadihiif barbaachise.
1. Lammiileen biyyatti akka if tiiksu
2. Lammiileen biyyattii akka roorroo mootummaa ifirraa qolatu
3. Lammiileen biyyattii akka yeroo gabaabaa keessatti gurmaahee roorroo biyyattiirra geessu deebisuu dandehuu ture
Mirgi kun mirga dhufaa qofa osoo hin taane mirga gareesi. Ummanni akka militia gurmeessee hidhachiisee naannoo isaa akka eegus ni dandeessisee. Kana laalchisee geeddaramni kun waan asii gadii kana je’a.
” A well regulated Militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed”
Kana jechuun yoo ummanni naannoo tokkoo mikitia gandaa gurmeessee hidhachiise, mootummaa naannoos tahe ka federaalaa hiikkachisuu hin dandehu.
Jaarraa 19ffaa walakkaa isaa irraa kaasee woggoota 30 guutuu Amerikaan gama dhihaa mootummaa federaalaa jala hin turre. Yeroon kun yeroo “Wild West” jedhamuun beekkama. Woggootan soddomman kana ummatumaatu wal gurmeessee diina alaas tahe hattuu fii saamtuus eeguu ture. Qawween ummanni Ameerikaa akka wal sodaatu gootullee akka mataa isaaniifi qabeenya isaaniillee kabachiisan dandeessifte.
Viva qeerroo bilisummaa Oduu Simbirtuu
Addisuu Araggaa Qixeessaa jedhee maqaa akaakayyuu isaatii jijjirratee kan uummata Oromoo ficcisiisaa turee amma immoo kan jijjiirama argame kana deggeru fakkaatee Oromoo irratti shira xaxaa jiru kun Oromoo utuu hin ta’in Amaaraa Oromiyaa keessatti dhalatee guddatee afaan Oromoo barate ta’uu isaa uummatni Oromoo hubatee irraa of eeggachuu akka qabu hubachiisaa Obbo Lammaa Magarsaas gooftaan keenya uummata Oromoo ti kan jedhan sana irraanfachuu akka hin qabnee hubachiisuun barbaada. Gooftaan isaanii uummata isaanii ta’uu eega beekanii Addisuu Araggaa diina uummata Oromoo hatattamaan uummata Oromoo irraa akka kaasaniif jabeessinee gaafanna.
Maqaan isaa inni dhugaa “Addisuu Araggaa Qixawu” ta’uu isaa yaa uummata Oromoo hubadhaa!!!
Farra Oromoo Rabbiin dhabama haa godhu. Inni ilma safaarii miliki jedhan saniif waan Oromoo dubbatuurraa akka of qusatu gorsaa.
OPDOn/ODP maalif Oromoo hiikachiisuudhaaf hirriba dhaba!
Amma yeroo kana kan hidhatee jiru Wayyaanee dha moo Oromoo dha! Wanni Oromoo hidhannoo/tixqii irraa hikkachiisuudhaaf dalagaa godhattan hoo akkeekni isaa hoo maali? Oromoo nagaya booreessaa hin jiru! Oromoo akkuma bara 1990 maa san ummata Oromoo irratti duuluu hedduu!
Yoo hidhannoo waraanaa hiiksisuu barbaaddan Amaaraa fii Tigree hiiksisaa! Kan ummata waraanaa jiru wayyaanee akka tahe beekkamaadha! Tigreen naannoo Benishaangul, Soomaalee, Afar fi warra biraa hidhachiifttee akka ummata Oromoo ficcisiisaa turte, ammaas itti jirtu beekkamaa! Presidaantiin ture, Abdi Ileen, akka Ato Getachew Asafaan hoogganamee hojii baadii fi ajjeechaa san ummata irratti akka hojjetu vidiyodhaan ragaa bahee jira! Kana warri hin dhageefatin sirri dhageeffadhaa!! Dila ummatni keenyaa daanga irratti dhumu san Lammaa Abdi Iley fi wayyaanee waliin waltahee dhiichisaa turee hubadhaa!! Oromoon hidhatee nagaya isaatii fi tan biyyaatuu eeguu qaba!
Mee dura hidhannoo warra biyyaa nagaya ishii dhoorkaa jiru irraa hiikuu yaalaa moo ni sodaattan sa! Oromoo hidhannoo irraa hiiktanii akkuma ammaan dura gootan san
gootanii Oromoo ficcisiisuufi. Yaa OPDO amma ODP taate dammaqi!!!!!!!
I hope, you don’t dare to go back like 1990s and mess again with Oromos by siding with Wayyaanee!!
Down Down Addisuu Aregaa!!
እሬቻ ከድሮ ኩሽ ሀገረ ከሆነችው ግብፀ ኦሮሞ ስፊ ህዝብ ነው ስንል ኦሮሞ ከግብፀ ጀምሮ መላውን ሚስራቅ አፍርካ ያጠቃልላል
ABO fi ummaanii tokko : Salaale,Feecheerraa Gara Shaggar Deemaa Jirra!
Ummanni Oromoo ummata guddaa. ummatni hammana ga’u qaama hidhatee isa tiksu hinqabu taanaan baay’inni isaa qofti faayidaa hinqabu;du’a isa hin’oolchu. TPLF Toophiyaa gadi qabdee ka bulchaa turte qawwee waan qabduuf. isiraa’eel ummata Arabaa hagas baay’atu gidduutti kabajamtee ka jiraattu waan qawwee qabduuf. Qawwee hiikkatanii siyaasa gaggeessuu jechuun morma ofiitti funyoo hidhanii of rarraasuu jechuu dha. Ammoo ABO’n muuxannoo 1991 irraanfachuus hinqabu.